डोल्पाका राजीमान सार्की « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » डोल्पाका राजीमान सार्की
डोल्पाका राजीमान सार्की
२०७२ मंसीर २१ जागरण मिडिया सेन्टर ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजीमानका अनुसार डोल्पामा स्कूल खुल्ने र पढाइ हुने वर्षमा पचास दिन मात्रै हो । तीन महिना जति जीवनबुटी खोज्ने, चार महिना जति चिसो हुने, चाडबाड अनि हप्तौं लम्बिने स्थानीय जात्रा–मेला–पर्व । वर्षमा पचास दिन स्कूल खुल्ने । वर्षान्तमा अर्थात् झन्नै पचास दिन पहिले मात्र पुस्तक पुग्ने । स्कूल जानआउन दुईदुई घन्टा उकालो ओरालो हिँड्नुपर्ने । यो वैज्ञानिक शदीमा विकासको मेरुदण्ड भनिने शिक्षा नै गतिलो नभए के हुन्छ ? के तपाईंले मेरुदण्डविनाको मानिस हिँडेको वा दौडेको त के उभिएकै देख्नुभएको छ ?
विमल आर्चायको व्लगबाट
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on December 7, 2015 .
← दलितले बाहुनी केटी बिहे गर्न हुँदैन भन्दै एमाले अखिलले कारवाही गर्दा ….	कोक्यापको अध्यक्षमा रेम विश्वकर्मा →